မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကျမနဲ့ ခရီးသွားဖော်များ
Posted by mabaydar at 9:31 PM
ခရီးသွားဖော်တွေ အကြောင်း ညီမလေးရေးထားတာ ရယ်လည်းရယ်ရ..စရိုက်ကလေး တမျိုးစီနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ လည်းကောင်းတယ်။ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။
6/12/2009 10:15 PM
ဟုတ်တယ်အမရေ... ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ သူတို့ Character တွေကို အခြေခံပြီး ခရီးသွားရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းရိုက်လို့ရမယ်... ဒါတောင် သူတို့အကြောင်းတွေက ကျန်သေးတယ်... ပိုစ့်အရမ်းရှည်နေလို့ အထင်ကရလေးတွေကိုပဲ ရေးထားတာ...
6/12/2009 10:28 PM
ခရီးသွားဆောင်းပါးက..... ငယ်ငယ်က ကျော်ဟိန်းရဲ့ရုပ်ရှင် "အချစ်တပွဲ၊စစ်ပွဲတရာ" ကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဟီးးးးး မိုက်တယ်...... သူ့နဲ့ မတော်လို့ ခရီးသွားရင်း အပြင်မှာတွေ့ရင် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေမှဖြစ်မယ်။ မတော်.... Blog ပေါ်မှာ ချရေးနေရင် ဒုက္ခ...
6/13/2009 2:25 AM
ှဗေဒါ တို့ ကတော့ တော်တော် လေ့လာမှုအား ကောင်းတာပဲ... လူအားလုံး အကြောင်း ပြန်ေ၇းနိုင်တယ်...
ဖွားဗေ လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ...ဟီးဟီး
ကိုဟတ်ရယ်.. သိတဲ့သူ အချင်းချင်းဆိုရင်တော့ ချမရေးပါဘူး... အသိတဲ့သူမို့ပါ.. ဟဲ.. ဟဲ..
မောင်... ဟုတ်ပါပြီး မြေးမောင်ရယ်...
ဆီဗုံးမှာ ရေးသွားတာလေးလဲ အမှတ်တရ ပြန်ဖြေရှင်းချင်လို့ပါ..
မောင်: အချို၇ည် ပေသွားတာ ကပ်စေးစေး နဲ့ စိတ်ညစ် စ၇ာပါ ...နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်.
ဖြေ: ဟုတ်ပါတယ်.. အချိုရည်ပေတာ စိတ်ညစ်စရာပါ... ကျမသာဆိုလဲ ပထမတော့ စိတ်ဆိုးမှာပဲ... ပိုစ့်ထဲမှာလဲ ကျမဘာကြောင့်ဘယ်လိုကဘယ်လို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ ခံစားရလဲဆိုတာကို ရေးထားပါတယ်... သူသာ ခုလို မလုပ်ပဲ ကျမကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်.. ကျမက လမ်းတစ်လျှောက်လုံး သူ့ကို လေးစားအားနာပြီး နေမှာပါ... သူများတွေတော့မသိဘူး... ကျမအမြင်မှာတော့ ကိစ္စက ဖြစ်ပြီးနေပြီ... ဘာမှ ပြန်ပြင်လို့လဲ မရတော့ဘူး.. တော်ရုံတန်ရုံ မြည်တွန်တောက်တီးတယ်ဆိုရင်တောင် ကျမစိတ်မဆိုးပါဘူး.. သူက မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ပြောနေလို့ပါ...
အချိုရည်မှောက်တာ ကျမအပစ်မို့လို့လဲ ခုလောက်ထိ ကျမသူ့ကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောပဲ ငုံ့ခံခဲ့တာပေါ့..
6/13/2009 6:11 AM
ခရီးဖော်တွေကို နာမည်ပေးထားတာ တော် တီးတီး တော်..
အတ္တပုံဆောင်ခဲများကတော့ အမိုက်ဆုံး..း)
ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ်ရော ဘယ်လိုနာမည်များ ပြန်ပေးထားတုန်း.. ဆိုတာ လုပ်ပါဦး..း)
6/13/2009 11:31 AM
လာရောက်ဖတ်ရူသွားပါတယ်၊ အခုခေတ် စလုံးလူငယ်တွေလည်း အဲ့လို အဘွားကြီးတွေနဲ့ ခရီးသွားရတာ မကြိုက်ကျပါဘူး။ သူတို့တွေ အတ္တ သိပ်ကြီးပြီး နဲနဲမှ သေးသေးတင် မခံကြပါဘူး။
ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ်က ရွှေမြန်မာလေ.. ဟဲ.. ဟဲ... အဖျားဆွတ်ခေါ်တော့ ရွှေပေါ့... ဟုတ်ဝူးလား.. သူတို့လဲ ကိုယ်တို့အဖွဲ့ကို ပေးချင်ပေးထားမှာပေါ့.. ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်နားမလည်တော့ စိတ်မဆိုးရဘူးပေါ့.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
Andrew ရေ.. ခုလို နားလည်ထောက်ခံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
6/13/2009 10:26 PM
Good .... :) waiting for next article .
6/17/2009 12:15 PM
အဟီးး ဖွားဖွားတွေကို ဖတ်သွားတယ်ဗျာ.. ပျော်စရာပါပဲ ခရီးထွက်ရတာ တခါတလေတော့လဲ စိတ်အခန့်မတဲ့ သူတွေပါလာတော့ အဆင်ပြေဘူးရယ်နော့်
7/01/2009 10:39 PM